Shirkii Amniga Qaran ee Muqdisho ka socday oo lasoo Gaba-gabeeyey (dhegayso) – Radio Daljir
Diseenbar 5, 2017 8:01 g 0
Shirkaan waxaa furay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Maxamed Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana ka qeyb galay madax ka socotay 25-dal, 6-ururo, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Xubno kale oo Shirka lagu Casuumay.
Warsaxaafadeedka ayaa guud ahaan ka kala koobnaa:-
1-Wakiilo ka kala socda 25 dal, 6 ururo caalami ah, iyo wakiillo ka kala socda dhammaan Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa 5tii December 2017 ku soo biiray Muqdisho si ay uga qaybqaataan Shirka Iskaashiga ee Soomaaliya oo uu si rasmi ah u furay Mudane: Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana Soo gaba-gabeeyey Mudane Xasan Cali Kheyre, Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
2-Soomaaliya waxay ka soo baxday mudo dheer oo adag oo xasillooni darro ah oo si xun u waxyeelaysay qaran ahaan. Si kastaba ha noqotee, Soomaaliya waxay ku hawlan tahay sidii loo soo celin lahaa dib u soo kabashada, oo looga golleeyahay in la helo Nabadda, Dhaqanka Ixtiraamka xuquuqda aadanaha, Horumarka, iyo Barwaaqada Dalka oo dhan.
3-Waxaan ka xishooneynaa oo ka qoomameynaynaa luminta Nolosha dadka aan waxba galabsan sababtoo ah weerarrada argagixisada ee sii socda, Gaar ahaan waxaan si xooggan u cambaareynaynaa weerarkii 14-kii Oktoobar sannadkaan 2017 ee ka dhacay Magaalada Muqdisho, taas oo keentay dhimashada in ka badan 500 oo oo isugu jiray haween, rag iyo carruur aanan waxba galabsan. Waxaan si wadajir ah naga go’an in aan taageerno Soomaaliya si ay uga hortagto, una cirib-tirto xag-jirnimada dhammaan qaababkeeda, iyo gacan ka geysashada horumarinta habab wax ku ool ah oo caddaalad ah iyada oo Soomaaliya ay u guurto dib-u-heshiisiinta.
4-Dowladda Federaalka Soomaaliya (FGS) waxay qaadday talaabooyin la taaban karo oo lagu xaqiijinayo hadafkeeda muddada dheer ee lagu gaarayo nabadda iyo barwaaqada dadka Soomaaliyeed, sida uu cadeynayo Qorshaha Horumarinta Qaran ee Soomaaliya (NDP), oo la ansixiyay 2016, Nabad gelyada Dawladda, siyaasadda, iyo mudnaanta horumarinta.
Waxaa lagu soo bandhigay hormarinta dhanka Dastuurka Soomaaliya, waxaana Sal looga dhigay Nabadda Soomaaliya, In Soomaaliya la gaarsiiyo Doorasho qof iyo Codkii ah sanadka 2021-ka, qorshaha lagu gaarayo oo lasoo gudbinayo sanadka 2018-ka, in loo sameeyo dad ka shaqeeyo gaarsiinta Doorashada Qof iyo Codka ku saleysan.
Iskaashiga Cusub ee Soomaaliya:-
Isla Shaqeynta Dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka, Xaqiijinta Ballan qaadyada labada dhinac si loo gaaro 2018-ka, si loo xaqiijiyo Taageerada Soomaaliya.
Hormarinta la dagaalanka Al-Shabaab, qorshaha Ciidamada AMISOM iyo Kuwa Dowladda mustaqbalka dhaw sida ay ugala wareegayaan sugidda amniga dalka, ka dhabeynta ballamada ciidamada Dowladda loo sameeyey. iyo ka qeyb qaadashada dadaalada Amniga.
Waxaan Dowladda Federaalka ugu mahad celineenaa qabashada Shirkii Wada shaqeynta ee Soomaaliya ee ka dhacay Muqdisho, waxaana ka mahad celineenaa hormarka laga gaaray Shirka inta uu socday.